सोमबार, मार्च 8, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 म्याट चन्डलर
म सधैं मेरो हाईस्कूल अर्थशास्त्र शिक्षक, श्री। Dilk सम्झना गर्दछु। आफ्नो प्रफुल्लित सेन्सर सेन्सरशीप बाहेक जब यो स्पष्ट भयो कि उनी श्राप दिन चाहन्थे (? ठिक… BUGS !?) क्लिकको उनको दोहोर्याइएको प्रयोगले वास्तवमा मेरो हार्मोन-एडल्ड मस्तिष्कमा बुद्धिको केही बिटहरू चलाउन सफल भयो। उसका मनपर्नेहरू मध्ये:
यदि तपाईं योजना गर्न असफल, तपाईं असफल योजना।
अब यो ती भयानक मोटिवेशनल पोस्टरहरूको आविष्कार हुनु भन्दा पहिले व्हेल टेलका तस्वीरहरू र पहाडमा चढ्ने व्यक्तिहरू तपाईंले प्रत्येक कर्पोरेट अफिसमा देख्नुहुनेछ। Adviceषि सल्लाहको प्रबन्ध तपाईंको अभिभावक, शिक्षक, र पीबीएसको क्षेत्र थियो। यस्तो सल्लाह को हाकेने प्रकृति को बावजुद, यो मसँग अडीयो।
अब मेरो व्यावसायिक जीवनमा, योजनाले मेरो समयको महत्त्वपूर्ण अंश लिन्छ, र राम्रो कारणका लागि। जब सँगै सामग्री राख्ने र सामाजिक मिडिया रणनीति, एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको कुन प्लेटफर्महरू र सेवाहरू तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि सबैभन्दा उपयोगी हो भनेर स्थापित गर्नु हो र सोही अनुरूप तपाईंको दृष्टिकोणको योजना बनाउनु हो।
केवल एक विली-नील दृष्टिकोण अपनाएर तपाईंको ब्रान्ड व्यक्तित्व कमजोर पार्छ, यो आर्थिक रूपले बेकार पनि हो। के भएको छ भन्ने बारेको सही लेखा बिना – र यो गर्न खर्च गरेको समय – तपाईंको अनलाइन प्रयासहरू समय र पैसाको पूर्ण अपशिष्ट हुन्।
तिनीहरूको नुनको मूल्यको कुनै पनि डिजिटल शपले तपाईंलाई तिनीहरूको योजनाको प्रक्रियामा टाँसिदिनेछ। यदि तिनीहरूले गरेनन भने, तिनीहरूलाई यसको बारेमा सोध्नुहोस्। यदि तिनीहरू हेम र हौं वा सिधा छैन भने, भाग्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको अनलाइन मार्केटिंग बजेट सिकुन्नेछ र रद्द चेक बाहेक यसको लागि देखाउन केहि पनि छैन।
यसको लागि, यदि तपाईंको कम्पनी एकल स्थानमा यसलाई डिजिटल स्थानमा जानको लागि स्थितिमा छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं सामाजिक परिदृश्यमा सीएमओको गाइड हेर्नुहोस्। यो मूल रूप मा एक सामाजिक मिडिया चिया पाना छ शीर्ष प्लेटफार्महरु र सेवाहरु को लाभ र कमिहरु लाई। विश्लेषण द्वारा गरिएको थियो 97 तल्ला, र यो एक उत्कृष्ट एक पाना संसाधन गाइड हो।
त्यहाँ धेरै सामाजिक नेटवर्क सेवाहरू छन्; कुनै पनि एक सही छैन, ती सबै प्रयोग गर्ने प्रयास प्रभावकारी छैन। त्यहाँ कुनै उत्तर छैन, कुनै एकल मिडिया मिडिया सामग्री दृष्टिकोण जुन हरेक ग्राहकको लागि काम गर्दछ। विचारशील, रचनात्मक योजनामा ​​संलग्न भएर, तपाईं आफ्नो समय र पैसाको उत्तम प्रयोग गर्नुहुन्छ।
टैग: कसरीसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया परिदृश्यसामाजिक मिडिया योजना
जोन डब्ल्यू रिवार्ड
मार्क्स 8, 2010 मा 4: 52 PM
भर्खर सामाजिक सञ्जालको साथ सुरु गर्दै र हरेक दिन धेरै सिक्दै। अझै पनि मेरो फोकस परिभाषित गर्दै म अगाडि बढ्दैछु। यहाँ महान साइट! थप पढ्नको लागि तत्पर।
मार्क्स 9, 2010 मा 1: 36 PM
वाक्यांशको सन्दर्भमा "यदि तपाइँ योजना गर्न असफल हुनुभयो भने, तपाइँ असफल हुने योजना बनाउनुहुन्छ" म भन्न चाहन्छु पूर्णतया सत्य हो। प्रत्येक व्यवसाय सामाजिक मिडिया अभियानको अर्थ, उद्देश्य र अन्तिम उद्देश्य हुनुपर्छ। साना व्यवसायहरूले ब्रान्ड जागरूकता सिर्जना गर्ने, ग्राहक सेवा सुधार गर्ने, बिक्री बढाउन र सम्बन्ध निर्माण गर्ने सम्भावनाहरू प्रति हजारौंमा सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग बढेको छ। तपाईंले आफ्नो योजना बनाइसकेपछि कुञ्जी के हो? त्यहाँ हुनको लागि, आफ्नो समुदाय निर्माण गर्नुहोस् र यसको हेरचाह गर्नुहोस्!
म निम्न जवाफ सिफारिस गर्दछु http://bit.ly/aqAGbe Startups.com मा, जहाँ मारिया सिप्काले तपाइँको समुदायलाई अनलाइन बनाउनको लागि विस्तृत योजना उल्लेख गर्छिन्।
BTW, तपाईंले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरहरू 😉 राख्न सक्नुहुन्छ
मार्स 10, 2010 मा 10: 10 एएम
त्यो एक महान सूची हो, पीट। पढाइ र योगदानको लागि धन्यवाद।
यति धेरै व्यक्तिहरू एक चरणलाई पनि सम्बोधन गर्न असफल हुन्छन् (तपाईले के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस्) कि बाँकी प्रक्रिया अर्थहीन हुन्छ। मेट्रिक्स लागू गर्ने स्पष्ट लक्ष्यहरू र उद्देश्यहरू बिना, तपाईं केवल पहिले शूट गर्दै हुनुहुन्छ र पछि प्रश्नहरू सोध्दै हुनुहुन्छ।